Bit By Bit - Mifehy - 6.6.1 nilaza fanekena
Mpikaroka tokony, dia afaka, ary aza manaraka ny fitsipika: ny sasany endriky ny fanekena ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana.
Ny fanekena ny fampahafantarana dia fototry ny hevitra iray-mety hiteny ny olona iray akaiky akaiky (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) - amin'ny fikarohana etika. Ny dikan-teny tsotra indrindra amin'ny fikarohana momba ny fikarohana dia milaza hoe: "ny faneken'ny rehetra ny zava-drehetra." Izany fitsipika tsotra izany dia tsy mifanaraka amin'ny fitsipika ara-ethika efa misy, fitsipika etika, na fanao fikarohana. Ny mpikaroka kosa dia tokony ho afaka, ary afaka manaraka fitsipika faran'izay sarotra: "fomban-tsafidy iray ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana."
Voalohany, raha te hivoatra mihoatra noho ny hevitra mahavariana momba ny faneken'ny iraka aho, te-hiteny bebe kokoa momba ny fanandramana an-tsekoly hianatra ny fanavakavahana aho. Ao anatin'ireo fandalinana ireo, ireo mpangataka sandoka izay manana toetra mampiavaka hafa, dia milaza fa ny lehilahy sy ny vehivavy sasany dia mihatra amin'ny asa isan-karazany. Raha misy karazana fangatahana karama kokoa matetika, dia afaka manatsoaka hevitra ny mpikaroka fa mety hisy fanavakavahana eo amin'ny dingam-panambadiana. Ho an'ireo tanjona amin'ity toko ity, ny zavatra manan-danja indrindra amin'ireo fanandramana ireo dia ny fandraisan'ireo mpandray anjara amin'ireo fanandramana ireo-ny mpampiasa-tsy manome alalana azy ireo. Raha ny tena izy, ireo mpandray anjara ireo dia voafitaka am-pahibemaso. Na izany aza, ny fanandramana eo amin'ny sehatra handalinana ny fanavakavahana dia natao tamin'ny fianarana 117, fara fahakeliny, tany amin'ny firenena 17 (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Ireo mpikaroka izay mampiasa ny fanandramana amin'ny sehatra handalinana ny fanavakavahana dia nahitana singa efatra amin'ireto fanadihadiana ireto izay mahatonga azy ireo ho azo ekena: 1) ny fahasimbana eo amin'ny mpampiasa; (2) ny tombontsoa ara-tsosialy lehibe amin'ny fananana fepetra azo antoka amin'ny fanavakavahana; (3) ny fahalemen'ny fomba hafa amin'ny fandrefesana fanavakavahana; ary (4) ny hoe ny famitahana dia tsy manitsakitsaka tanteraka ny fitsipika momba izany (Riach and Rich 2004) . Ny tsirairay amin'ireo fepetra ireo dia manan-danja, ary raha misy tsy afa-po, ny raharaha etika dia ho sarotra kokoa. Ny telo amin'ireo endri-javatra ireo dia azo avy amin'ny foto-pitsipi-pitondran-tena ao amin'ny tatitra Belmont: fahasimbana voafetra (Respect for Persons and Beneficence) ary tombontsoa lehibe sy fahalemena hafa amin'ny fomba hafa (Beneficence and Justice). Ny endri-javatra farany, ny tsy fahazakana ny fitsipika mifehy ny tontolon'ny siansa, dia azo avy amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fahalalan'ny vahoaka ao amin'ny Menlo Report. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampiharana momba ny asa dia sehatra iray izay misy efa andrasana amin'ny famitahana azo atao. Noho izany, ireo fanandramana ireo dia tsy mandoto ny toetry ny etika efa marefo.
Ankoatra io soso-kevitra fototra io dia maro ireo IRBs no nanatsoaka hevitra fa ny tsy fahampian'ny fankatoavana ao anatin'ireo fandalinana ireo dia mifanaraka amin'ny fitsipika efa misy, indrindra fa ny Commonweule 46.116, ampahany (d). Farany, ny tribonan'i Etazonia dia nanohana ny tsy fahampian'ny fanekena sy ny fampiasana ny famitahana amin'ny fanandramana an-tsekoly hanamarinana ny fanavakavahana (laharana 81-3029. Fitsarana ambaratonga faharoa ao Etazonia, Seventh Circuit). Noho izany, ny fampiasana ny fanandramana eny an-tsena dia tsy mifanaraka amin'ny fitsipika etika efa misy ary ny fitsipika efa misy (farafaharatsiny ny fitsipika ao Etazonia). Ity hevitra ity dia tohanan'ny vondrom-piarahamonina fikarohana ara-tsosialy maro, IRB ampolony, ary ny Fitsarana Amerikanina. Noho izany dia tsy maintsy mandà ilay fitsipika tsotra "ny faneken'ny rehetra ny zava-drehetra." Tsy fitsipika izay arahin'ny mpikaroka, ary tsy tokony hanaraka izany izy ireo.
Ny fandefasana ny "faneken'ny rehetra ny zava-drehetra" dia mandao ny mpikaroka amin'ny fanontaniana sarotra: Inona avy no karazana fanekena azonao amin'ny karazana fikarohana? Mazava ho azy, nisy adihevitra be momba ity fanontaniana ity, na dia ny ankamaroany dia ao anatin'ny sehatry ny fikarohana ara-pahasalamana amin'ny vanim-potoanan'ny taona analogie. Fintininy ny adihevitra, Nir Eyal (2012) nanoratra hoe:
"Ny tena mampatahotra raha ny fidirana an-tsehatry, no vao mainka dia avo-fiantraikany na raikitra 'fanakianana fiainana safidy', ny mihoatra izany dia sarobidy-entana sy mahabe, vao mainka manokana ny faritra ny tenany fa ny fidirana an-tsehatry mivantana misy fiantraikany eo, vao mainka nifanohitra sy unsupervised ny no manao azy, ny ambony kokoa fa ilaina ny matanjaka nampahafantatra fanekena. Tamin'ny fotoana hafa, ny filàna tena matanjaka nilaza fanekena, sy tokoa, ho fanekena amin'ny endriny rehetra, dia kely. Tamin'ny ireo fotoana, vola lany avo dia mety mora foana fa mila handresentsika. "[Anatiny Citations voahilika]
Hevitra manan-danja avy amin'io adihevitra io dia ny hoe ny faneken'ny rehetra dia tsy misy na tsy misy na inona na inona: misy endrika matanjaka kokoa sy matanjaka kokoa. Amin'ny toe-javatra sasany dia toa ilaina ny faneken'izy ireo miorina mafy, fa amin'ny hafa kosa, ny fanamafisana kokoa ny faneken'ny hafa. Avy eo, hamaritra antony telo mety hitranga ireo mpikaroka mba hahazoana ny faneken'izy ireo voamarina, ary hamaritra safidy vitsivitsy amin'ireo tranga ireo aho.
Voalohany, indraindray mangataka ny mpandray anjara mba hanome fanekena azo antoka dia mety hampitombo ny loza atrehiny. Ohatra, ao amin'ny Encore, manontany ireo olona miaina ambanivohitra governemanta hanomezana alalana ny hampiasa ny ordinatera ampiasaina amin'ny fanivanana ny sivana amin'ny aterineto dia mety hametraka ireo izay manaiky ny risika mitombo. Rehefa mitombo ny loza mety hitranga, ny mpikaroka dia afaka miantoka fa ny fampahalalana momba ny zavatra ataony dia ampahibemaso ary mety ho azon'ny mpandray anjara atao ny mandà. Azon'izy ireo atao koa ny mitady fitenenana amin'ny vondrona izay misolo tena ny mpandray anjara (ohatra, ONG).
Faharoa, indraindray manana fanekena feno alohaloha alohan'ny hanombohan'ny fanombohana dia mety hampandefitra ny sanda ara-tsiansa momba ilay fianarana. Ohatra, amin'ny fifanoherana ara-pihetseham-po, raha nahafantatra ny mpikaroka fa nanao fanandramana momba ny fihetseham-po ny mpikaroka dia mety nanova ny fitondran-tenany izany. Ny fampihetseham-baovao avy amin'ireo mpandray anjara, ary mamitaka azy ireo aza, dia tsy mahazatra amin'ny fikarohana ara-tsosialy, indrindra amin'ny fanandraman'ny laboratoara amin'ny psikology. Raha nilaza fanekena tsy azo atao mialoha ny fianarana manomboka, mpikaroka afaka (ary matetika aza) debrief mpandray anjara taorian'ny fianarana no eo. Ny famerenam-bava dia amin'ny ankapobeny dia ahitana ny fanazavana ny tena zava-misy, ny famerenana ny voka-dratsy, ary ny fahazoana ny fankatoavana taorian'ny zava-misy. Misy adihevitra sasantsasany anefa, raha ny tokony ho izy dia mety amin'ny fanandramana amin'ny fanandramana eo amin'ny sehatra, raha mety hanimba ny mpandray anjara (Finn and Jakobsson 2007) ny famoahana azy.
Fahatelo, indraindray dia tsy mahomby firy ny fanekena ny faneken'ny rehetra avy amin'ny olona rehetra voakasiky ny fianaranao. Ohatra, alao sary an-tsaina ny mpikaroka iray izay maniry ny hianatra ny sakana Bitcoin (Bitcoin dia vola crypto-vola ary ny blockchain dia rakitsoratra ho an'ny daholobe momba ny transakta Bitcoin (Narayanan et al. 2016) ). Mampalahelo fa tsy azo atao ny mahazo alalana avy amin'ny olona mampiasa Bitcoin satria maro amin'ireo olona ireo no tsy fantatra. Amin'ity tranga ity, afaka miezaka hifandray amin'ny mpampiasa Bitcoin ny mpikaroka ary mangataka ny fanekena azy ireo.
Ireo antony telo mahatonga ny mpikaroka tsy ho afaka hahazo fanekena azo antoka, ny fitomboan'ny loza, ny fiezahana mitady tanjona, ary ny fetran'ny logistika dia tsy ny antony mahatonga ny mpikaroka hiantehitra amin'ny fanekena. Ary ny vahaolana naroso nataoko - ny fampahafantarana ny vahoaka mikasika ny fikarohana, ahafahana miala amin'ny fisintonana, ny fandefasana fifanarahana avy amin'ny antoko fahatelo, ny fandefasana, ary ny fandefasana fifanekena avy amin'ny santionan'ny mpandray anjara - dia mety tsy ho azo atao amin'ny toe-javatra rehetra. Ankoatr'izay, na dia azo atao aza ireny safidy ireny, dia mety tsy ampy ho an'ny fianarana. Ny ohatr'ireny ohatra ireny dia mampiseho fa ny faneken'izy ireo dia tsy hoe na tsy misy na inona na inona, ary ireo vahaolana enti-mamorona dia afaka manatsara ny fandanjalanjan-tsain'ny fianarana izay tsy afaka mahazo fankatoavana feno avy amin'ny antoko rehetra.
Ny fehin-kevitra, fa tsy hoe "manaiky ny zava-drehetra", ny mpikaroka dia tokony hahavita sy hanaraka fitsipika faran'izay sarotra kokoa: "endri-panekena iray ho an'ny ankamaroan'ny zavatra." Tsy voatery sady tsy ampy ny fitenenana momba ny fitsipika. Fitsipika momba ny Fanajana ny Olona (Humphreys 2015, 102) . Ankoatra izany, ny fanajana ny olona dia iray amin'ireo fitsipika tokony handanjalanjana rehefa mandinika ny fitsipika momba ny fikarohana; Tsy tokony handroso avy hatrany ny tombontsoa, ​​ny rariny, ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro, izay naverimberin'ireo etika nandritra ny 40 taona lasa (Gillon 2015, 112–13) . Ny fitenenana amin'ny sehatra etika, ny faneken'ny rehetra ho an'ny zava-drehetra dia toerana manerana izao tontolo izao izay miteraka toe-javatra toy ny baomba Time (jereo ny fizarana 6.5).
Farany, amin'ny maha-azo ampiharina izany, raha mihevitra ianao manao fikarohana tsy misy karazana fanekena, dia ho fantatra fa ianao any amin'ny faritra fotsy. Mitandrema. Jereo indray ny etika tohan-kevitra izay mpikaroka nanao mba hitarika fampianarana ny fanavakavahana andrana tsy manaiky. Dia ny fanamarinana ho matanjaka? Satria fahalalana ampy fanekena no ivon'ny fampianarana maro no nandry etika, Tokony ho fantatrao fa ianao dia mety hatao hoe eo mba hiaro ny fanapahan-kevitra.